တာချီလိတ်မြို့ သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် လူသတ် တရားခံ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ..! - APANNPYAY
Home / နိုင်​ငံတကာသတင်း / တာချီလိတ်မြို့ သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် လူသတ် တရားခံ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ..!
တာချီလိတ်မြို့ သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် လူသတ် တရားခံ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ..!
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်ခရိုင်အတွင်း ဖွင့်လစ်ထားတဲ့ ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူ ၀ါရစ်စရာ အသက် ၂၂ နှစ်ကို သတ်ပြီး အလောင်းကို မြေမြုပ်ဖျောက်ဖျက်မှုနဲ့အလိုရှိနေသူ အဓိက တရားခံ နှစ်ဦးဟာ မိုင်ဆိုင်မြို့ မှ မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ် မြို့ ကို ထွက်ပြေးသွားခဲ့လို့ထိုင်းရဲတွေဟာ တရားခံတွေကို ဖမ်းမိနိုင်ဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနိုင်းနေကြောင်း သိရပါတယ်။
က၀ိဒါ အသက် (၂၅) Kaewida, 25, နဲ့Miss Praianuch aged 24. ပရီယာနု အသက် ၂၄ နှစ်တို့ နှစ်ဦးဟာ အ ဓိက လူသတ်တရားခံတွေဖြစ် ပြီး ၂၅ ရက်နေ့ က ကာရာအိုကေမယ် ၀ါရစ်စရာသေဆုံးကို ပူးပေါင်း ကြံစည် သတ်ဖြ တ်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
တရားခံနှစ်ဦး လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ တာချာလိတ် မြို့ နယ်အတွင်းကသူတိုအလုပ်လုပ်တဲ့ ကာရာအိုကေ ရုံ နေရာကို ခြေရာခံမိသွားပြီ လို့ လည်း သိရပါတယ်။
သေဆုံးသွားသူ အမျိုးသမီးဟာ ခွန်ကင်ပြည်နယ်သူဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းနေသူ တရားခံတွဲရဲ့သတင်းအချက်လက်ကို ရဲတွေဆီ တိုင်ကြားပြီး ဖမ်းခိုင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကနေ သူမကိုရန်ငြိုးထားပြီး လူသတ်သမားငှားရမ်း သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Source : https://www.facebook.com/Social-Action-for-Children
ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျး ခငျြးရိုငျခရိုငျအတှငျး ဖှငျ့လဈထားတဲ့ ကာရာအိုကဆေိုငျမှာ အလုပျလုပျနသေူ ဝါရဈစရာ အသကျ ၂၂ နှဈကို သတျပွီး အလောငျးကို မွမွေုပျဖြောကျဖကျြမှုနဲ့ အလိုရှိနသေူ အဓိက တရားခံ နှဈဦးဟာ မိုငျဆိုငျမွို့မှ မွနျမာနိုငျငံ တာခြီလိတျ မွို့ကို ထှကျပွေးသှားခဲ့လို့ ထိုငျးရဲတှဟော တရားခံတှကေို ဖမျးမိနိုငျဖို့ မွနျမာအာဏာပိုငျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးညှိနိုငျးနကွေောငျး သိရပါတယျ။
ကဝိဒါ အသကျ (၂၅) Kaewida, 25, နဲ့ Miss Praianuch aged 24. ပရီယာနု အသကျ ၂၄ နှဈတို့နှဈဦးဟာ အ ဓိက လူသတျတရားခံတှဖွေဈ ပွီး ၂၅ ရကျနကေ့ ကာရာအိုကမေယျ ဝါရဈစရာသဆေုံးကို ပူးပေါငျး ကွံစညျ သတျဖွ တျခဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
တရားခံနှဈဦး လကျရှိနထေိုငျနတေဲ့ တာခြာလိတျ မွို့နယျအတှငျးကသူတိုအလုပျလုပျတဲ့ ကာရာအိုကေ ရုံ နရောကို ခွရောခံမိသှားပွီ လို့လညျး သိရပါတယျ။
သဆေုံးသှားသူ အမြိုးသမီးဟာ ခှနျကငျပွညျနယျသူဖွဈပွီး မူးယဈဆေးဝါး ရောငျးနသေူ တရားခံတှဲရဲ့ သတငျးအခကျြလကျကို ရဲတှဆေီ တိုငျကွားပွီး ဖမျးခိုငျးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျကနေ သူမကိုရနျငွိုးထားပွီး လူသတျသမားငှားရမျး သတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။